MDC-N Haione Ichibatana neMDC-T
Chivabvu 25, 2011
Mutungamiri werimwe bato reMDC, VaWelshman Ncube, vanoti havaoni paine kubatana kwebato ravo nebato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, sezvo zvakakonzera kupesana kwavo zviri zvinhu zvakadzama uye zvinoonekwa pachena.
Bato reMDC rakapatsanuka muna Gumiguru 2005 mushure mekunge paita makakatanwa makuru pakati paVaNcube naVaTsvangirai.
Vachinyora paFacebook neTwitter neChipiri, VaNcube vakati havaoni MDC yaVaTsvangirai ichitambira kubatana nebato ravo semapato akaenzana.
VaNcube vanoti zvikuru zvinoita kuti vatadze kubatana kuve bato rimwe chete, inyaya yemhirizhonga yavanoti yava kuitwa nebato raVaTsvangirai, vachiti bato iri rakatora tsika yemhirizhonga kubva kuZanu PF.
Mapato maviri aya akashanda pamwe mukusarudzwa kwemutauriri weparamende, VaLovemore Moyo, izvo zvanga zvichitarisirwa zvakare neveruzhinji musarudzo dziri kutarisirwa mukupera kwegore rino.
Mutauriri weMDC yaVaNcube, VaNhlanhla Dube, vanoti kushanda pamwe kwavakaita pakusarudza mutauriri weparamende hwaingove kwekudzivirira bato reZanu PF kuti risatora mukana wekumbunyikidza vana veZimbabwe.
Mutauriri weMDC yaVaTsvangirai, VaDouglas Mwonzora, vanotiwo havawirirane naVaNcube panyaya yekuti pane kusawirirana, vachitiwo bato ravo rakazvipira kushanda pamwe nechero bato rinoda hutongi hwegutsaruzhinji.